ဏကြီးမျက်နှာကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း လက်မလွှတ်တမ်းကိုင်ထားရတဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု – Askstyle
ဏကြီးမျက်နှာကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ရင်း လက်မလွှတ်တမ်းကိုင်ထားရတဲ့ အဖြစ်မှန်ကို ပြောပြလာတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ပရိသတ္ေတြခ်စ္ၾကတဲ့ မီေမာင္ႏွံေလး ပိုင္ၿဖိဳးသုနဲ႔ ဏႀကီးဟာ စိတ္တူကိုယ္တူ၊ ဝါသနာတူၿပီး ေနနဲ႔လ ေရႊနဲ႔ျမလို လိုက္ဖက္လြန္းသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ၾကင္နာမႈအျပည့္နဲ႔ ဂ႐ုစိုက္ၾကတဲ့ ပိုင္ၿဖိဳးသုနဲ႔ ဏႀကီးတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကို ပရိသတ္ေတြကလည္း အားက်ခ်စ္ခင္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျမဲတမ္း အရိပ္တၾကည့္ၾကည့္နဲ႔ ရိွတတ္တဲ့ သူမတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံႏွစ္ေယာက္ရဲ႕အေၾကာင္းကို ပိုင္ၿဖိဳးသုက အခုလိုပဲ ေျပာျပလာပါတယ္။
“ကၽြန္မရဲ့ ဦးေရခဲ၊ ဦးကန႔္လန႔္၊ စက္႐ုပ္ႀကီး စိတ္ထဲရွိ ရွိတဲ့အတိုင္းေတြေျပာတတ္လြန္းသူႀကီး…Media ေတြမွာ interview ေျဖတိုင္းေဒၚသုကေလ ဦးေရခဲမ်က္ႏွာေလးကိုတစိမ့္စိမ့္ၾကည့္ၿပီး လက္ကေလးကိုမလႊတ္တိုင္းကိုင္ထားတာကို ယူတို့ေတြကေဒၚသုသိပ္ Ro တယ္လို့ထင္ၾကတယ္ဟုတ္???”
“တကယ္ေတာ့ တစိမ့္စိမ့္ၾကည့္တာမဟုတ္ဘူး မ်က္‌ေျချပတ္မခံရဲဘဲ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ၾကည့္ေနတာ…မလႊတ္တမ္းတြဲထားတဲ့လက္က သူဒုတ္ထိုးအိုးေပါက္ေတြေျဖၿပီးစကားမွားေတာ့မယ္ဆိုရင္ ႀကိတ္ၿပီးကုတ္ဖို့တြဲထားတာ….”
“အဲ့‌ဒီေလာက္ေစာင့္ၾကည့္အကဲခတ္သတိေပးေနတဲ့ၾကားထဲကလည္း ေျပာခ်င္တာကိုရေအာင္ေျပာေသးတာ… တစ္ခါတစ္ေလမ်ား သုသုကၽြန္ေတာ့္လက္ကိုကုတ္ေနၿပီ။သူမေျပာေစခ်င္ေတာ့ဘူးနဲ႔တူတယ္လို့ေတာင္ အလိုက္မသိ mediaကိုထည့္ေျဖပစ္တာ… အဲ့သလိုပါဆို ကၽြန္မရဲ့ဦးေရခဲက…… But that’s the reason I’m crazy about him even after all these6years ” ဆိုၿပီး ဏႀကီးရဲ႕အေၾကာင္းေတြကို ေျပာျပလာပါတယ္။
ပိုင္ၿဖိဳးသုနဲ႔ ဏႀကီးတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့ ဟန္ေဆာင္မႈကင္းၿပီး အရမ္းကို ခ်စ္စရာေကာင္းတာပဲေနာ္။ အခ်ိန္ေပးၿပီး ဖတ္႐ႈေပးတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရိွပါတယ္။
Source: Paing Phyo Thu’s fb,CRD-momolay
ပရိသတ်တွေချစ်ကြတဲ့ မီမောင်နှံလေး ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ ဏကြီးဟာ စိတ်တူကိုယ်တူ၊ ဝါသနာတူပြီး နေနဲ့လ ရွှေနဲ့မြလို လိုက်ဖက်လွန်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ကြင်နာမှုအပြည့်နဲ့ ဂရုစိုက်ကြတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ ဏကြီးတို့ ဇနီးမောင်နှံကို ပရိသတ်တွေကလည်း အားကျချစ်ခင်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ရှိတတ်တဲ့ သူမတို့ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကို ပိုင်ဖြိုးသုက အခုလိုပဲ ပြောပြလာပါတယ်။
“ကျွန်မရဲ့ ဦးရေခဲ၊ ဦးကန့်လန့်၊ စက်ရုပ်ကြီး စိတ်ထဲရှိ ရှိတဲ့အတိုင်းတွေပြောတတ်လွန်းသူကြီး…Media တွေမှာ interview ဖြေတိုင်းဒေါ်သုကလေ ဦးရေခဲမျက်နှာလေးကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီး လက်ကလေးကိုမလွှတ်တိုင်းကိုင်ထားတာကို ယူတို့တွေကဒေါ်သုသိပ် Ro တယ်လို့ထင်ကြတယ်ဟုတ်???”
“တကယ်တော့ တစိမ့်စိမ့်ကြည့်တာမဟုတ်ဘူး မျက်‌ခြေပြတ်မခံရဲဘဲ မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်နေတာ…မလွှတ်တမ်းတွဲထားတဲ့လက်က သူဒုတ်ထိုးအိုးပေါက်တွေဖြေပြီးစကားမှားတော့မယ်ဆိုရင် ကြိတ်ပြီးကုတ်ဖို့တွဲထားတာ….”
“အဲ့‌ဒီလောက်စောင့်ကြည့်အကဲခတ်သတိပေးနေတဲ့ကြားထဲကလည်း ပြောချင်တာကိုရအောင်ပြောသေးတာ… တစ်ခါတစ်လေများ သုသုကျွန်တော့်လက်ကိုကုတ်နေပြီ။သူမပြောစေချင်တော့ဘူးနဲ့တူတယ်လို့တောင် အလိုက်မသိ mediaကိုထည့်ဖြေပစ်တာ… အဲ့သလိုပါဆို ကျွန်မရဲ့ဦးရေခဲက…… But that’s the reason I’m crazy about him even after all these6years ” ဆိုပြီး ဏကြီးရဲ့အကြောင်းတွေကို ပြောပြလာပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုနဲ့ ဏကြီးတို့ ဇနီးမောင်နှံကတော့ ဟန်ဆောင်မှုကင်းပြီး အရမ်းကို ချစ်စရာကောင်းတာပဲနော်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။